Covid 19: fampahalalana ho an'ny Covid 19 Antigen Test Instruction, sns-BALLYA
Aiza no ahazoana fitsapana koba any San Diego?
Ity fampahalalana eto ambany ity dia manampy ny daholobe hikaroka toeram-pitsaboana, laboratoara, hopitaly, orinasa hanaovana fanandramana koba any San Diego. Angamba manana fotoana ahazoana andrana kobao anio ary valin'ny kobazia iray andro. Ny datas rehetra avy amin'ny harem-bahoaka, tsy tompon'andraikitra amin'ny fahamarinan'ny vaovao izahay. Raha mahita lesoka na fampahalalana diso ianao dia mifandraisa aminay […]
Aiza no ahazoana fitsapana haingana an'i Covid any Houston?
Ity torolàlana ity ho an'ny besinimaro hahitana tobim-pitsaboana, hopitaly, tobim-pitsaboana ho an'ny fitsapana kovaida haingana any Houston. Angamba ireto laboratoara ireto dia afaka manao andrana kobaidina amin'ny andrana miaraka amin'ny valin'ny kobaidin'ny andro iray ihany. Ny datas rehetra avy amin'ny harem-bahoaka, tsy tompon'andraikitra amin'ny fahamarinan'ny vaovao izahay. Raha mahita lesoka ianao na fampahalalana diso, azafady […]
Fitsapana Antibody any Chicago
Mba hanampiana ny fikarohana ampahibemaso sy hahitana toerana mety / hopitaly / tobim-pitsaboana / laboratoara hahazoana fitiliana kobazy haingana, eny fa na dia hanaovana andrana kobao iray aza dia manangona mombamomba ny besinimaro hanampiana ny olona hahatratra ny toerana mety. Ny datas rehetra dia avy amin'ny loharanom-bolam-panjakana, tsy tompon'andraikitra amin'ny fahamarinan'ny vaovao izahay. Raha ianao […]
Fomba 3 hiova ny marketing aorian'ny COVID-19
Fanodinam-bola hainganaFampihenana ny vidin'ny marketing ilaina amin'ny tanjona azo tsapain-tanana momba ny firosoana sy ny fitazonana ny fiovam-poFamakiana miaraka amin'ny fiaraha-miory Milaza fa ny COVID-19 dia nanova ny fomba fanaovana izao tontolo izao amin'ny varotra. Manomboka amin'ny magazay kely Mom-and-Pop ka hatramin'ny orinasa lehibe, ny orinasa tsirairay dia niatrika fanamby tsy mbola nisy toa azy teo anoloan'ny areti-mandringana. Manokana, ny ezaka ara-barotra ary […]
Mitahiry tahiry mandritra ny fanidiana - Inona no tena ilainao?
Ny fitobiana sy ny fikarakarana mialoha dia hetsika matetika mifandraika amin'ny areti-mifindra, quarantine, lockdown na toe-javatra tsy ampoizina tsy voafehinao. Ny tahiry dia mitovy amin'ny prepping, ny fihetsika manangona tahiry entana na fitaovana marobe, ary matetika no atao alohan'ny tranga maika amin'ny alàlan'ny fanomanana izany. Fa ny kapila lehibe […]
Tantaran'ny saron-tava Ny tantara ny saron-tava dia azo tsoahina hatramin'ny ela, fa ny saron-tava sy ny fitsaboana taloha dia tsy dia mifamatotra; ny "zavatra toy ny sarontava" indrindra teo amin'ny firaketana ara-tantara dia niseho tamin'ny taonjato faha-6 tal. Eny, rehefa manao lanonana ara-pivavahana ianao, dia matetika no fonosinao amin'ny lamba ny tavanao. Amin'ny lafiny iray, ity […]
67 mpamatsy sarontava tarehy any Shina
1. Sarin'ny sarontava: anarana marika maska ​​tarehy: Henan Gore Medical Instruments Co., Ltd. Adiresy: Zone Industrial North, Dingluan Town, County Changyuan, Faritanin'i Henan. Tranonkala ofisialy: https://www.tianyancha.com/ Famokarana sarontava: sarontava fiaramanidina, saron-tava azo ampiasaina, fitaovam-pitsaboana, famatsiana fiantohana mpiasa Ny orinasa voatanisa: TSY renivohitra voasoratra: RMB 12 tapitrisa Mombamomba ny orinasa: Manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana ny orinasa, fampandrosoana, […]